Impembelelo kwimpilo yengqesho ngebhoksi
Omnye wemidlalo yemidlalo, apho abaninzi abafazi bangaphumelela ngokuphumelelayo ngeenjongo zempilo, yi-basketball. Umdlalo weqela lezemidlalo nebhola sele lixhaphake ngenxa yokufikeleleka kwayo kunye nokuthabatha kwabo bobabini ababukeli kunye nabathathi-nxaxheba ngokwabo. Yintoni eyimpembelelo entle kwimpilo ye basketball?
Umdlalo we-basketball ubonakaliswe ngobuninzi beendlela zobugcisa kunye nobuchule kunye nomoya ophezulu wokumelana nomzabalazo. Ibhola lebhola lebhola liyisixhobo esihle kakhulu sokuphuhlisa umzimba. Kwinkqubo yalo mdlalo, iintlobo ezahlukeneyo zomsebenzi wemoto zisetyenziselwa: ukuhamba, ukuhamba, ukuxuma. Ngexesha elifanayo ngexesha lomdlalo, imeko yezemidlalo kunye noqhagamshelwano ngqo lwabalandeli bahlala beshintsha. Izenzo zebhola yebhola yebhola zinefuthe elihle kwimpilo ngenxa yomsebenzi okwenziwe ngokomzimba, obonakaliswe ngongoma okhoyo. Ukuphindaphinda ukukhawuleza kwinqanaba lokunyakaza kunye nokuxhuma rhoqo kunye neendlela ezizenzekelayo kunye nokuhamba kwemidlalo ngokukhawuleza. Phantse kwi-40% yexesha elide lokudlala kwi-basketball ngumsebenzi ophezulu wabadlali. Ngokomyinge, ngexesha lomdlalo omnye ngexesha lebhoksikidi, umncintiswano uwela malunga neekhilomitha ezingama-7 kwaye wenza malunga ne-20 jerks ephakamileyo, kwaye wenza nenani elikhulu leempazamo kunye nomzamo omkhulu, unikezele ukulwa. Izimo ezahlukeneyo zemijelo ehlukeneyo zifuna ukuba abadlali badlale iinqwelo ezinkulu zezakhono zezakhono kunye nezakhono. Kwinkqubo yokuphucula ezo zakhono, ukwanda okwenyuka kumgangatho wokuqina komzimba komntu kufinyeleleke, onokubaluleka okubalulekileyo kwimpilo.
Ngentlangano efanelekileyo yeeklasi ze-basketball, kukho amathuba amakhulu okusebenza kwimpilo emzimbeni. Kwinkqubo yokudlala umntu ubonisa umsebenzi wokuqhuba imoto, ngelixa uqeqesho olufanelekileyo lunikezelwa kwiinkqubo zempumlo, izigulane zangasese zangaphandle kunye neenkqubo zokutya. Okubaluleke kakhulu kwimibutho yokunyakaza ziinkalo ezininzi zesimiso senzwa, njengoko zihlala zibeka esweni kwaye zilawula umsebenzi wezitho zale ndawo okanye ezixhobo. Imisebenzi yebhola yebhola yebhola ibangele ukwandiswa okukhulu kwemida yombono wembambano, enempembelelo emihle kwisantya nokuchaneka kwembono yokubona. Kuboniswa ukuba ngoqeqesho oluqhubekayo lwebhoksi ye-basketball, uvelwano lwe-analyzer ebonakalayo kumbono we-pulses ukukhanya emva kokuba umdlalo ukhuphuke ngo-40%.
Ukuzilolonga ngokomzimba, okwenziwa ngumbundu womntu ngexesha lomdlalo webhoksikidi, kubaluleke kakhulu ekuqiniseni nasekuphuculeni imeko yomzimba yesimo senhliziyo. Inqanaba lentliziyo ngexesha lomdlalo phakathi kwabathathi-nxaxheba lifikelela kuma-180 ukuya ku-230 ngeengqungquthela ngomzuzu, kunye noxinzelelo olukhulu lwegazi-ukuya kwi-180 ukuya kwi-200 mm ye-mercury. Iindleko zamandla emdlalweni omnye ngumfanekiso okhangayo-malunga ne-900 ukuya kwi-1200 kilocalories! Ukusebenza kwamathambo ukuze kuzaliswe amandla "ukutshisa" inani elikhulu leentlawulo zeoli kunye nokufaka isandla ekugqibeleni ubunzima bomzimba obuninzi, ukunikezela ngokunciphisa nokuqina kumfanekiso. Kwaye ekubeni ininzi yemisebenzi yesayensi sele ibhaliwe malunga nefuthe elibi kwiikhilogram ze "zempilo", enye ingxabano ekukhethweni kweeklasi zebhayisiki njengokuphumla okusebenzayo kubonakala.
Ixesha leentshukumo zokuphefumula ngexesha lomdlalo webhoksiksikidi lifikelela kumajikelezo ama-50-60 ngomzuzu, kwaye umthamo wokuphefumla umzuzu uphakathi kwe-120 ne-150 ilitha. Ngako oko, umthwalo onjalo kwiimpawu zokuphefumula unempembelelo entle kwimpilo ngokunyusa umgangatho obalulekileyo wemiphunga.
Impembelelo echaphazelayo kwimpilo yomdlalo webhola ibhola ibingabangelwa kuphela kumsebenzi wokudlala opheleleyo, kodwa kunye nokusebenza kweendlela ezahlukeneyo zokudlala ezisebenziswa ekuqeqesheni. Ezinye izinto ezifanayo, ezifana nokuphonsa ibhola kwibhaksi, ifumane isicelo kwiziko lempilo elonyango.
Ukuze uqeqesho lwebhoksi yebhoksi ye-basketball lube nefuthe elihle kwimpilo yakho, kufuneka uhlawule ingqalelo ethile kwimicimbi yokulungiselela uqeqesho. Ngokukodwa, kucetyiswa ukuba udlale ibhola yebhoksi kuphela kwi-uniformed knitted sport, eyenza ukuphakama kwemoya ephakamileyo kunye nokunyuka kwamanzi (okungabonwa ngophupho olukhulu ngexesha lomdlalo). Izicathulo zezemidlalo, ezikhethiweyo zebhokballball, zifanele zikhulule, zikhululekile kwaye zikwazi ukuqinisekisa ukuzaliseka kwazo zonke iintlobo zeentshukumo ezenziwa ngexesha lomdlalo. Kufuneka uhlawule ingqalelo kummandla wendawo yokudlala yebhakballball. Ubuninzi bezithotho ezincinane kule ndawo zingabangela ukulimala kakhulu kubadlali (ukuvuthwa, ukutshatyalaliswa kwe-ankle, ukuchithwa). Nangona kunjalo, ukunikezelwa kwezinga eliphezulu lomdlalo kunye nobunzima bezinye izinto, kunye nebala lokudlala ngokukhawuleza kwinqanaba lebholabhasi, ukulimala kakhulu kunokufumaneka ngokukhawuleza ngexesha lomdlalo. Ngoko ke, ukuze ugweme ukulimala kubadlali, bonke abathathi-nxaxheba mabawubambelele ngokusemthethweni imithetho yomdlalo. Ngenxa yesizathu esifanayo, kucetyiswa ukuba usebenzise izicathulo ezinezitifiketi zerabha kwaye zingenazo izithende.
Ukongeza kwimpembelelo enempilo kwimpilo yabantu, ukudlala ibhola yebhoksi kunceda ekuphuhliseni ukuzithiba, ukunyamezela okwandisiweyo, isicwangciso kunye nobuchule bokucinga, isibindi nokuzimisela. Uqeqesho oluchanekileyo lukhokelela ekwakheni ukuzimela, ukunyamezela kunye nenjongo.
Izinto ezithandwayo zihamba nge-skating skating
Indlela yokuzaliswa kunye nokuncinci ngexesha elifanayo
Iipilates: izenzo zokunyakaza
Isethi ye-tai-boo umzimba
Isaladi kaKesari ngenkukhu
I-Pasta kunye ne-sausage kunye nepilisi ebisiweyo
Ulwaphulo lobugcisa: ubugcisa kunye nobugcisa
Ugogo kagogo ngenyama
Ubuhlobo phakathi kwendoda nomfazi kunokwenzeka, ukuba ...
I-Q: ubucwebe bezambatho zemihla ngemihla
IHoroscope yombonakaliso weNtombikazi ngo-2010
Iibisiki kunye ne-ayisikrimu